Ngwọta sistemu ikuku ikuku nke Beijing Holtop
Igwe ikuku ụlọ ọrụ
Iwulite Sistemụ Ikuku Ọhụrụ n'ụzọ zuru oke - Onye na-eweta ngwọta HVAC ntụkwasị obi gị
Ebe obibi ERV/HRV
HOLTOP CFA Series Comfort Fresh Air HRV - Igwe ọkụ na-eweghachite ọkụ dị elu
Igwe anaghị agba nchara ERV
Mgbanwe ikuku ụzọ okpukpu abụọ, mgbake ume, oriri dị ala, arụmọrụ PM2.5>99%
DX COIL Ikuku ikuku Unit/AHU
Ọdịdị Dị Mfe, Ike Iweghachite, Nhazi Na-agbanwe agbanwe
Ihe ngbanwe ọkụ dị elu 3D
Ịrụ ọrụ dị elu 95%, Anụ ahụ Wahable, Ogologo Ọrụ Ndụ.
Sistemụ ikuku ikuku akwụsịla n'uko. Nhazi kọmpat, mgbake ike, ihe nzacha HEPA
Mee ka ọgwụgwọ ikuku dịkwuo mma na nchekwa ike
Ọgbakọ mgbanwe ngwaahịa Holtop na teknụzụ-Ọdụ ụgbọ mmiri Yunnan
Na Disemba 17, 2021, Holtop Products and Technology Exchange Conference mere na Kunming Intercontinental Hotel. Ihe karịrị ndị nrụpụta 120 na ndị enyi na-ere ahịa si Yunnan bịara mmemme ahụ. Isiokwu ọgbakọ a bụ “Si Yundian na-apụta, na-ewu obodo nrọ; ọkachamara na sp......
Na Disemba 17, 2021, Holtop Products and Technology Exchange Conference mere na Kunming Intercontinental Hotel. Ihe karịrị ndị nrụpụta 120 na ndị enyi na-ere ahịa si Yunnan bịara mmemme ahụ. Isiokwu ọgbakọ a bụ “Si Yundian na-apụta, na-ewu obodo nrọ; ọkachamara na sp...........
Ekele maka ihe ịga nke ọma nke Holtop Products and Technology Exchange Conference @Henan
Ekele maka ịga nke ọma nke Holtop Products and Technology Exchange Conference @Henan Mr. Liu Mingshan, onye isi injinia nke Holtop Group, kesara echiche imewe, uru teknụzụ na ngwa na oru ngo nke ngwaahịa ikuku ikuku Holtop. Holto.........
Okpomọkụ na ike mgbake ventilashion usoro
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ike na-agbake ventilashion nwere ike inye usoro ikuku ventilashị dị ọnụ ahịa nke na-ebelatakwa mmiri na ikpo ọkụ. Uru nke okpomọkụ na ike mgbake usoro ventilashion 1) ha na-ebelata okpomọkụ ọkụ ka a chọrọ obere ntinye ọkụ (site na isi iyi ọzọ) iji bulie ........
Igwe ikuku: onye chọrọ ya?
Dị ka ụkpụrụ ụkpụrụ ụlọ ọhụrụ na-eduga na envelopu ụlọ siri ike karị, ụlọ na-achọ ihe ngwọta ikuku ikuku iji mee ka ikuku dị n'ime ụlọ dị ọhụrụ. Azịza dị mfe maka isiokwu nke isiokwu a bụ onye ọ bụla (mmadụ ma ọ bụ anụmanụ) bi ma na-arụ ọrụ n'ime ụlọ. Ajụjụ ka ukwuu bụ ka anyị ga-esi mee p.........
Ọhụrụ Nnukwu Ebe Ụlọ ọha Ụlọ akwụkwọ Ụlọ ọgwụ Ebe obibi Ụlọ ọrụ mmepụta ihe Mba ofesi
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Daonier Haiyi Wuxi Co., Ltd
Ọdọ Mmiri Xinlexi
Usoro mmiri Rongchuang 40# 41# gburugburu obodo ahụ
anwụ nke osimiri
Ebe Mgbakọ na ihe ngosi Meijiang
Ebe ngosi ihe ngosi Olympic Winter na Paralympic nke Beijing
Ụlọ akwụkwọ akụkọ n'abalị a
Huazhi Vientiane ụwa
Jinan wide band gap semiconductor ụlọ ọrụ obodo
Ụlọ ikpe ndị mmadụ na Dongming County
Tianjin Zhongxin Ecological City North Normal University Mgbakwunye School Middle School
Yizhuang 12-afọ agbanwe agbanwe School of Beijing No. 2 n'etiti ụlọ akwụkwọ
Tonglu Bilingual School jikọtara na East China Normal University
Alaka Weihai nke ụlọ ọgwụ Beijing
Hospitallọ ọgwụ ndị mmadụ na Wuhan Huangpi
Lianyungang Donghai ụlọ ọgwụ nne na ụmụaka
Ụlọ ụlọ ọgwụ Qianfo Mountain
Holtop DX Central Air Conditioner maka ụgbọ elu Etiopia
Sistemụ ikuku ikuku nke Mahadum Stanford
Tọrọ ntọala na 2002
Ikike mmepụta ihe
E rere ya na mba 100+
Were gị banye na Holtop Group
Onye mmekọ ọnụ
Ndị na-agbanwe ọkụ
Ụlọ elu dị elu